Firimu raVaMudzingwa Roburitsa Pachena Hupenyu hweVakhomani San
Rudzi rweKhomani San rwunonzi rwuduku kwazvo, uye rwunowanikwa mugwenga reKalahari muSouth Africa neBotswana
Rurimi rwechi Nuu rwunotaurwa nerumwe rudzi rwudukuduku rwunowanikwa mugwenga reKalahari muSouth Africa, rweKhomani San, rwunonzi rwatarisana nekuparara
Rurimi rwechi Nuu rwunotaurwa nerumwe rudzi rwudukuduku rwunowanikwa mugwenga reKalahari muSouth Africa, rweKhomani San, rwunonzi rwatarisana nekuparara.
Zvinonzi kwasara vakuru vatatu chete vachiri kutaura mutauro uyu, zvekuti vakapera kufa vose, panenge passiina vamwe vanenge vokwanisa kutsetsenura mutauro uyu, kunozova kupfigwa kwemusuwo werurimi urwu.
Vechidiki verudzi rwechi Khomani San vanonzi havachina hany’a nemutauro wavo sezvo vave kutaura mimwe mitauro inosanganisira Afrikaans, asi vachisema mutauro wavo.
Izvi ndizvo zvakaita kuti chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu chiri munyika yeSouth Africa, VaDavison Mudzingwa, nevamwe vavo vavanobata navo mukambani yavo yeMvura Ya Afrika Productions, vabike bhaisikopo rinotarisa nezvekuparara kwemutauro uyu.
VaMudzingwa, avo vanove nyanzvi mukubikwa kwemafirimu vanoti vakafunga kutevera chimwe chizvarwa cherudzi urwu icho chiri kuzama kurwa hondo yekuedza kuponesa mutauro uyu.
“Tinofara nekuti bhaisikopo iri tisati tariburitsa kuti ringe richienda kuvanhu, pane vatakapa kuti vairone vatipe maonero avo, saka vanhu ava katokatyamara kuti izvi zvinhu zviri kuitika kune mamwe matunhu,” VaMudzingwa vanodaro.
Bhaisikopo iri, iro rinonzi “Lost Tongue” riri kutarisirwa kuparurwa mwedzi uno kumutambo weSocially Relevant Film Festival uri kuitirwa muNew York muAmerica kutanga pakati pemwedzi uno.
VaMudzingwa vanoti bhaisikopo ravo iri nderimwe remaviri chete akatorwa kubva muAfrica, pakati pegumi acharatidzwa pamutambo uyu.
Vanoti pari zvino vari kukwenenzvera rimwe firimu ravakaitira muZimbabwe rinonzi “Bitter Sweet Sugar”, iro rinotarisa zviri kuitika kuChisumbanje uko kuri kurimwa nzimbe dzekugadzirisa mafuta edzimotokari.
Vagari vemudunhu iri vagara vari kunetsana nekambani iri kurima nzimbe idzi yeGreen Fuel iyo vari kupomera kuti iri kuvatorera minda yavo uye kuvambunyikidza.